Nooca Dalabka Ay PSG Ka Aqbali Karto Barcelona Oo La Ogaaday-Miyayse Barcelona Awood U Leedahay In Ay Arintan Samayn Karto? - Gool24.Net
Nooca Dalabka Ay PSG Ka Aqbali Karto Barcelona Oo La Ogaaday-Miyayse Barcelona Awood U Leedahay In Ay Arintan Samayn Karto?
June 29, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxda PSG ayaa markii hore meel adag iska taagtay qiimaha lacageed ee uu kooxdeeda kaga bixi kari Neymar Jr laakiin waxaa soo baxay war cusub oo sheegaya in maamulka PSG ay hadda u furan yihiin in ay hoos u dhigaan dalabkoodii.
Kooxda Barcelona ayaa xaqiijisay in Neymar Jr uu doonayo in uu dib ugu soo laabto Camp Nou laakiin waxay ku doodeen in ayna wali iyagu go’aan ka gaadhin haddii ay xidiga reer Brazil dib ula soo saxiixanayaan.
Waxaa hore u soo baxay war sheegayay in PSG ay Neymar Jr dul dhigtay lacag 300 milyan yuro ah taas oo caqabad wayn ku noqon kartay koox kasta oo uu hunguri kaga jiray saxiixa xidiga reer Brazil balse hadda dalabka PSG ayaa noqday mid sidan ka sahlan.
Wargayska dalka France ka soo baxa ee Le Parisien ayaa shaaciyay in PSG ay badashay nooca dalabkii ay aqbali kartay ee uu Neymar Jr kooxdeeda kaga bixi karo waxayna si wayn hoos ugu dhigeen halkii ay markii hore joogeen.
Warka Le Parisien ee ay maanta ka qoreen Neymar Jr ayaa lagu sheegay in kooxda PSG ay u furan tahay in ay aqbasho dalab u dhexeeya 150-130 milyan yuro oo lagu daray laba ciyaartoy oo Barcelona ka tirsan si uu Camp Nou ugu laaban karo.
Arintan ayaa keeni karta in wada xaajoodyada kooxaha Barcelona iyo PSG ay noqon karaan kuwo guul ku dhamaan kara iyada oo labada ciyaartoy ee dalabyadan la raacin karaa ay ka mid yihiin Coutinho, Dembele, Rakitic ama Umtiti.
Haddii Demeble ama Coutinho uu midkood qayb ka noqonayo heshiiska Neymar Jr waxay Barcelona u baahan kartaa in ay raaciso dalab lacageed oo 130 milyan yuro ah.
Laakiin haddii ay Barcelona dalabkeeda Neymar Jr raacinayso Ivan Rakitic iyo Umtiti waxay markaas u baahan kartaa lacag 150 milyan yuro ah halka haddii Dembele uu qayb ka noqonayo ay dalab lacageed oo 130 milyan yuro ah la raacin karo waxaana lagu kaabi karaa Rakitic.
“Maanta bixitaanka albaabka ayaa loo furay” ayaa lagu yidhi xogta wargayska Le Parisien ee lagu shaaciyay in PSG ay hoos u soo dhigtay qimihii ay markii hore ku doonaysay in Neymar uu ku bixi karo.
Maamulka PSG ayaan doonayn in Neymar Jr uu kooxdooda kaga bixi karo qiimo ahaan ka hoosayn lacagtii ay Barcelona kagala soo wareegeen oo 222 milyan yuro ahayd taas oo ay ku doonayaan qayb lacag ah iyo qayb ay ciyaartoy ahaan kaga rabaan Barca.
Barcelona ayaan wax deg deg ah ugu jirin saxiixa Neymar Jr waxayna doonayaan in PSG ay u muujiyaan in ay xataa iska dayn karaan si ayna qiimaha xidiga reer Brazil u sii qaaliyayn waxayna sidoo kale Barca doonaysaa in aan hoos loo dhigin qiimaha ciyaartoyda ay doonayaan in ay heshiiska Neymar qayb ka noqdaan.
Coutinho iyo Dembele ayaa lacago min 100 milyan yuro ka badan ku jooga Barcelona taas oo haddii uu midkood qayb ka noqdo heshiiska Neymar si wayn hoos ugu soo dhigi karta lacagta ay PSG ku doonayso xidiga reer Brazil.
Wada xaajoodyada labada kooxood ayaa todobaadyadii ugu danbeeyay soo socday waxaana la filayaa in wali ay sii jiitami doonaan maadaama oo ay ciyaartoy kale ku lug leeyihiin si heshiiska loo dhamaystiri karo.